ỌRỤ LOGARITHM NA EXCEL - EXCEL - 2019
Ọrụ LOG na Microsoft Excel
Otu n'ime arụmụka mgbakọ na mwepụ kachasị mma iji dozie nsogbu mmụta na ihe bara uru bụ ịchọta logarithm nke nọmba nyere site na isi. Na Excel, ịrụ ọrụ a, enwere ọrụ pụrụ iche a na-akpọ LOG. Ka anyị mụta n'ụzọ zuru ezu ka esi etinye ya n'ọrụ.
Jiri nkwupụta LOG
Onye ọrụ LOG bụ nke ụdị nke ọrụ mgbakọ na mwepụ. Ọrụ ya bụ ịgbakọ logarithm nke nọmba a kapịrị ọnụ maka isi ihe. Nchịkọta nke onye ọrụ ahụ akọwapụtara dị mfe:
= LOG (nọmba; [isi])
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọrụ ahụ nwere nanị arụmụka abụọ.
Arụmụka "Ọnụ ọgụgụ" bụ ọnụ ọgụgụ sitere na ya iji gbakọọ logarithm ahụ. Ọ nwere ike iburu ụdị ọnụọgụgụ ọnụ ma bụrụ ntụtụ aka na cell nwere ya.
Arụmụka "Ntọala" na-anọchite anya ntọala nke logarithm ga-agbakọ. Ọ nwekwara ike ịnwe, dị ka nọmba nke mkpụrụ, ma rụọ ọrụ dị ka ntụpọ cell. Arụmụka a bụ nhọrọ. Ọ bụrụ na ewepụrụ ya, mgbe ahụ, a na-ewere isi ahụ dị ka efu.
Na mgbakwunye, na Excel enwere ọrụ ọzọ nke na-enye gị ohere ịgbakọ logarithms - LOG10. Ihe dị iche site na nke gara aga bụ na ọ nwere ike gbakọọ logarithms naanị na ndabere nke 10, ya bụ, naanị logarithms decimal. Nkọwa ya dị mfe karịa nkwupụta ahụ e nyere na mbụ:
= LOG10 (nọmba)
Dịka ị pụrụ ịhụ, arụmụka naanị nke ọrụ a bụ "Ọnụ ọgụgụ", ya bụ, ọnụọgụ ọnụọgụ ma ọ bụ ịkọ aka na cell nke ọ dị. N'adịghị ka onye ọrụ LOG ọrụ a nwere esemokwu "Ntọala" enweghi ya kpam kpam, ebe ọ bụ na e chere na isi nke ụkpụrụ ọ na-arụ 10.
Usoro 1: jiri ọrụ LOG
Ugbu a, ka anyị tụlee iji onye ọrụ LOG na otu ihe atụ. Anyị nwere kọlụm nke nọmba ọnụọgụ. Anyị kwesịrị ịgbakọ logarithm nke isi ha. 5.
Anyị na-eme nhọpụta nke mkpụrụ ndụ efu efu na mpempe akwụkwọ na kọlụm nke anyị na-eme atụmatụ iji gosiputa nsonaazụ ikpeazụ. Ọzọ, pịa akara ngosi ahụ "Tinye ọrụ"nke dị nso na ntụ ọka.
Window amalite. Ndị isi ọrụ. Gaa na udi "Mgbakọ na mwepụ". Mee nhọrọ nke aha "LOG" na ndepụta ndị ọrụ, wee pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mmalite arụmụka arụ ọrụ amalite. LOG. Dika i nwere ike ihu, o nwere uzo abuo ndi kwekorita na onye oru a.
N'ọhịa "Ọnụ ọgụgụ" na nke anyị, tinye adres nke cell mbụ nke kọlụm ebe data data dị. Enwere ike ime nke a site n'iji aka ya dee ya n'ọhịa. Mana enwere uzo di nma. Debe cursor na ubi a kapịrị ọnụ, wee pịa bọtịnụ òké aka ekpe na tebụl okpokoro nwere ọnụọgụ ọnụahịa anyị chọrọ. Nhazi nke cell a ga-apụta ozugbo na ubi "Ọnụ ọgụgụ".
N'ọhịa "Ntọala" banye nnọọ uru ahụ "5", ebe ọ ga-abụ otu maka usoro nhazi niile.
Mgbe ịmechara ndị a, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Nsonaazụ nke ọrụ nhazi LOG gosipụta ozugbo na cell ahụ nke anyị kwuru kpọmkwem na nzọụkwụ mbụ nke ntụziaka a.
Ma, anyị jupụtara naanị sel mbụ nke kọlụm ahụ. Iji mejupụta izu ike, ịkwesịrị ịdepụta usoro ahụ. Debe cursor na akuku aka nri nke cell nke nwere ya. Akara njirimara gosipụtara, nke a gosipụtara dika obe. Mechie bọtịnụ aka ekpe gị ma dọrọ obe gaa na njedebe nke kọlụm ahụ.
Usoro ahụ dị n'elu mere ka mkpụrụ ndụ niile dị na kọlụm "Logarithm" jupụta na nsonaazụ. Eziokwu bụ na njikọ ahụ akọwapụtara n'ọhịa "Ọnụ ọgụgụ"bụ onye ikwu. Mgbe ị na-agafe n'ime mkpụrụ ndụ ma ọ gbanwee.
Ihe omumu: Ọkachamara ọkachamara Excel
Usoro 2: jiri ọrụ LOG10
Ugbu a, ka anyị lee ihe atụ nke iji onye ọrụ LOG10. Dịka ọmụmaatụ, buru otu tebụl na otu data data. Ma, ugbu a, n'ezie, ọrụ ahụ ka na-agbakọọ logarithm nke nọmba dị na kọlụm ahụ "Ntọala" na ndabere 10 (ọnụ ọgụgụ logarithm).
Họrọ akpa efu efu na kọlụm. "Logarithm" ma pịa akara ngosi ahụ "Tinye ọrụ".
Na window nke meghere Ndị isi ọrụ mezie mgbanwe na ụdị "Mgbakọ na mwepụ"mana oge a anyị kwụsịrị n'aha ahụ "LOG10". Pịa na ala nke windo na bọtịnụ ahụ. "OK".
Na-arụ ọrụ window window arụmụka LOG10. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ nwere naanị otu ubi - "Ọnụ ọgụgụ". Anyị na-abanye na ya adreesị cell mbụ nke kọlụm ahụ "Ntọala", n'otu ụzọ ahụ anyị si jiri ihe atụ mbụ. Wee pịa bọtịnụ ahụ. "OK" na ala nke windo ahụ.
Ihe si na nchịkọta data, ya bụ, logarithm decimal nke nọmba nyere, gosiri na cell ahụ ekwuru na mbụ.
Iji mee nyocha maka ọnụọgụgụ ndị ọzọ niile dị na tebụl, anyị na-eji otu nchịkọta ahụ mee ihe, dịka oge gara aga. Dịka ị pụrụ ịhụ, a na-egosipụta nsonaazụ nke logarithms nke nọmba na mkpụrụ ndụ, nke pụtara na ọrụ ahụ agwụla.
Ihe omumu: Ọrụ ndị ọzọ mgbakọ na Excel
Ngwa arụ ọrụ LOG na-enye ohere na Excel naanị na ngwa ngwa iji gbakọọ logarithm nke nọmba a kapịrị ọnụ maka isi ihe. Onye otu onye ọrụ ahụ nwekwara ike gbakọọ ọnụ ala eleada, ma maka nzube ndị a, ọ na-arụ ọrụ nke ọma iji ọrụ ahụ LOG10.